Labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo muran uu soo kala dhexgalay - BBC News Somali
Labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo muran uu soo kala dhexgalay
4 Jannaayo 2019
Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa shaaciyay inaanu la shaqeyn karin Golaha Shacabka ee dalka oo uu ku eedeeyay arimo ay ka mid yihiin inuu hareer maray habraaca dastuurka ee meelmarinta sharciga xisaab xirka, iyo wada shaqeyn la'aan ku aaddan xiriirka dibedda ee baarlamaanka federalka.
Qoraal uu soo saaray guddiga joogtada ah ee Aqalka Sare isla markaana uu ku sixiixnaa gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullahi ayaa loogu baaqay madaxweyne Farmaajo inuu soo farageliyo arinta isla markaana uu wax ka qabto cabashadooda.
Hadaba khilaafkaasi labada aqal ee baarlamaanka iyo waxa sababay ayaa Senator Maxamed-Aamiin Sheekh Cismaan oo ah guddoomiyaha guddiga difaaca iyo amniga ee aqalka sare waxa uu uga warramay weriyaha BBC Xasan Cali Geelle.
Maqal 100 casho kaddib, xaguu ku dambeeyay dilkii Khaashuqji?
100 casho kaddib, xaguu ku dambeeyay dilkii Khaashuqji?
Maqal Halkan ka dhageyso wareysiga Madaxweyne Saciid Deni oo dheer
Halkan ka dhageyso wareysiga Madaxweyne Saciid Deni oo dheer
Maqal Falanqayn: Bolton muxuu Bariga Dhexe ka doonay?
Falanqayn: Bolton muxuu Bariga Dhexe ka doonay?
Maqal Maxaa dib loogu dhigay shaciinta natiijada doorashada Koongo
Maxaa dib loogu dhigay shaciinta natiijada doorashada Koongo
Maqal Abwaan ka hadlay xayiraad la saaray hudheel Hargaysa ku yaal
Abwaan ka hadlay xayiraad la saaray hudheel Hargaysa ku yaal
Maqal Abwaan ka hadla xayiraad la saaray hudheel Hargaysa ku yaal
Abwaan ka hadla xayiraad la saaray hudheel Hargaysa ku yaal